सरकार भर्सेस कोरोना! :: Setopati
आयुष चौहान वैशाख २४
नेपालमा कोरोना संक्रमित तथा यसै कारणले मृत्यु हुनेको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दो छ। विश्वलाई नै त्रसित बनाएको कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपाल पनि अछुतो हुन सकेन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझै संक्रमित बढेमा थेग्न नसकिने भनेर विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको छ। करोडौँको जनसंख्या रहेको देशमा केही हजार संक्रमित हुँदैमा देशले हात उठाउनु लजास्पद विषय हो।
लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमणमा फसिरहेको देशलाई भाइरसको संक्रमणसँग जुध्न निकै हम्य हम्य परिरहेको छ। सबै दलसँग हातमेलो गरेर कोरोनासँग लड्नु पर्ने बेलामा उल्टै प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नाले देश झनै राजनीतिक भूमरीमा फसेको छ।
आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री जुटाउनु पर्ने समयमा सत्ताको पछाडि लागेको परिणाम आज सम्पूर्ण देशबासीले भोगिराख्नु परेको छ। कोभिड-१९ सँग लड्नको लागि स्वास्थ्य संरचना निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हो तर सरकार भने कहिले बाटोको शिलान्यास त कहिले धरहराको उद्घाटनमा व्यस्त देखिन्छ।
सायद नवनिर्मित धरहराको टुप्पोबाट वीर अस्पतालमा कोरोनाले छटपटाइरहेका बिरामीको पीडा देखिदैन होला। धरहराको उचाइले गर्व गर्ने भन्दा पनि बढ्दो संक्रमण दर नियन्त्रणमा ल्याउने समय हो।
धरहराको उद्घाटनभन्दा पनि वीर अस्पतालको नयाँ भवनको उद्घाटन गर्ने समय हो। सरकार कोरोनासँग लड्न नियम बनाउने भन्दा पनि आफैले बनाएको नियम उल्लंघन गर्ने अग्रसर देखिन्छ।
जनतालाई भिड नगर्न भने पनि बालुवाटारमा आफै सयौँको संख्यामा बैठक गरिरहेको छ। कोरोनासँग जुध्ने बेलामा आफ्नै पार्टीका नेताहरुसँग जुधी रहनाले आम नेपाली सर्वसाधारणहरुले दुख पाइरहेका छन्।
उपत्यका सहित देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ। काठमाडौँमा अस्थाई बसोबास गर्दै आएकाहरु पुनः आफ्नो गाउँ फर्केका छन्। विगतमा प्रतिगमन रोक्न भन्दै सयौँ गाडीमा जनतालाई काठमाडौँ लिएर आउने नेताहरु अहिले जनतालाई साँच्चीकै आवश्यक पर्दा भने गायब छन्।
प्रतिगमनको विरोध गर्दै 'हामी यहाँ छौँ' भनेर बाटोमै आएर आवाज उठाउनेहरु अहिले फसबुकका भित्ताबाट सहानुभूति व्यक्त गरिरहेका छन्। कोभिडसँग लड्न थप आवश्यक बजेट पास गर्न भन्दा पनि व्यक्तिगत तथा वैदेशिक स्वार्थ बोकेको एमसिसी सम्झौता पास गर्न उन्मुख देखिन्छन्।
प्रतिगमनको विरुद्ध विभिन्न सभा सम्मेलनमा खर्च गर्नेहरुले अहिले स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरी जनता र सरकारलाई सहयोग गर्दिँदा के जान्थ्यो र? प्रतिगमन भन्दै गाउँबाट गाडीका गाडी जनता ओसार्ने नेताहरुले अहिलेको परिस्थितिमा जनतालाई गाउँ जाने गाडी मिलाइदिएको भए के जान्थ्यो र?
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा अहिले दिनहुँ लाखौँको संख्यामा संक्रमितहरु बढ्दै गइरहेका छन्। नेपालभन्दा कयौँ गुणा विकसित मुलुकलाई आज कोरोनाले डामाडोल बनाएको छ।
भारतको स्वास्थ्य संयन्त्रलाई समेत थला परिसकेको भाइरसले नेपालको स्वास्थ्य संयन्त्रको कुन हालत गर्ने छ भनेर सरोकारवालाहरुले समय मै सोच्न पर्छ। मित्र राष्ट्रको अवस्था हेरी अहिले समय हुँदा नै आवश्यक रणनीति बनाउन जरुरी छ।
नेपालले भारतको बढ्दो संक्रमित दरलाई मध्यनजर गरी धेरै अगाडि नाका बन्द गर्नु पर्ने थियो। अहिले ठमेलका होटेलहरु नेपाल भई विदेश जाने भारतीयहरुले भरिएका छन्। सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिए अझै संक्रमित दिन दोगुना रात चारगुना हुन सक्छ।
सरकारले तत्काल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्नु पर्नेछ। भारतमा अक्सिजनको कमिले धेरैले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। नेपालले त्यसबाट पाठ सिकी विभिन्न ठाउँमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउन जरुरी छ।
संक्रमण अझै पनि पूर्ण रुपमा फैलिनसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण हवाई उडान बन्द तथा भारतीय नाकाहरु तत्काल सिल गरी देशभित्र सक्दो स्वास्थ्य संरचना बनाउन जरुरी छ।
अस्पतालमा आवश्यक सामग्रीहरु तुरुन्त व्यवस्था गरी जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनि लड्न तयार भएर बस्न पर्छ। स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई भत्ता तथा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। देशमा रहेको सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी अस्पतालको क्षमता पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार थप गर्नका लागि तयार बस्न जरुरी छ।
सरकारले रोकथामका लागि गर्नुपर्ने कामहरु समयमा नगरेकाले अहिले यो जटिल परिस्थिति आएको हो। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न तत्काल कदम चाल्नु पर्छ।
अब बाँकी रहेको २ वर्षको सत्ता टिकाउन दौडधुप गर्नु भन्दा पनि कोरोनाबाट सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सुरक्षित गर्नसके नेपाली जनताले पक्कै पनि अर्को चुनावमा बहुमतले जिताइ ५ वर्षको सरकार चलाउने अवसर दिने छन्।
मुख्यत: हामी स्वयम निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गरे अवश्य यस भाइरस माथि जित हासिल गर्न सक्ने छौँ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २४, २०७८, १५:५३:००